Shaqada Caalamiga ah ee Ribadu waa udub dhexaadka halganka caalamiga ah ee lagu ilaalinayo wabiyada iyo xuquuqda beelaha. Waxay la shaqeeyaan shabakad caalami ah oo dadka ay waxyeelladu gaadhay, ururrada bulshada, kuwa deegaanka, u doodda xuquuqda aadanaha, iyo kuwa kale ee ka go'an joojinta mashaariicda burburka webiga isla markaana sare u qaadaya xulashooyinka ka sii wanaagsan. Webiyaasha caalamiga ahi waxay raadsadaan adduunyo halkaas oo webiyaasha caafimaad qaba iyo xuquuqaha bulshooyinka maxalliga ah la qiimeeyo lana ilaaliyo. Ahmiyadooda shaqadoodu waa Latin America, Aasiya, iyo Afrika. Barnaamijka McKnight ee Koonfur-bari Aasiya, International Rivers waxay heshay maalgelin mashruuc shaqadooda Wabiga Mekong.
Webiga Mekong River ayaa taageeraya nolosha 60 milyan oo qof oo ku nool Koonfur Bari Asia. Iyada oo ah adduunka ugu ballaaran kalluumaysiga gudaha, waxay bixisaa sugnaanta cuntada iyo ilo muhiim ah oo borotiin ah. Qaybaha beeraha iyo bariiska ee beeraha qulqulaya ee Mekong ayaa waxay ku xiran yihiin nafaqooyinka biyaha wabiga ee ka soo wata waqooyiga. Afar dowladood oo ka kala socda dalalka Cambodia, Laos, Thailand, iyo Vietnam ayaa qorshaynaya in ay dhistaan kow iyo wiqiyadood oo waaweyn oo ku yaala Webiga Mekong kaasoo si toos ah ugu hanjabaya sugnaanta cuntada ee in ka badan laba milyan oo qof. Rivers International ayaa gacan ka geysatay hoggaaminta dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah, oo lagu magacaabo Save the Mekong Coalition, kaas oo ku dhiirri-galiyay xukuumadaha gobolka in ay ka tanaasulaan qorshaha lagu dhisayo biyo-xireennada biyaha wabiga ee ku yaala Webiga Mekong. Si taas loo sameeyo, isbahaysigu wuxuu u shaqeeyay inuu kor u qaado wacyigelinta dadweynaha ee saameynta gawaarida wuxuuna ku wargeliyay saraakiisha dawladda dhammaan afarta waddan ee saamaynta ku leh biyo-xidheenkan.
Nasiib darro, Bishii Nofembar 2012 - inkasta oo naqdiyadii iyo dadaallada ururrada sida Rivers International - hay'adaha maamulka ee Laos iyo Cambodia ay ansixiyeen, siday u kala horreeyaan, dhismaha Xayaburi iyo Lower Sesan 2. Dhismaha biyo-xidheenadani waxay halis gelin doonaan hab-nololeedyada boqolaal kun oo ku tiirsan caafimaadka iyo kalsoonida dadka kalluunka ee ku nool webiga Mekong.
Mawduuca: International, Koonfur Aasiya